Orinasa fanodinana vera vita amin'ny vera - Mpanamboatra sy mpamatsy milina fanenitra ao Shina
rafitra rojo mandeha ho azy fitaratra milomano fisaka milina puenmatic
Mampiasa ny fifehezana PLC sy ny rafitra fikirakira tontonana ity milina ity. Manatanteraka polishing fisaka izy io, ny rafitra polishing poliatika dia mahatonga ny milina ho sariaka kokoa amin'ny fandidiana, ny famaranana fitaratra dia tena mety. Ny milina dia afaka mihazakazaka amin'ny maody mandeha ho azy sy ny maody amin'ny tanana. Ny rafitra mpampita ny rojom-pandrenesana Conveyor, ny hafainganam-pandeha dia azo ovaina amin'ny alàlan'ny mpandrindra hafainganana.
Masinina 11 rojom-pifandraisana nomerika milina fanodinana vera 45 degre
Ny milina dia natao ho an'ny fikosoham-baravarankely / poloney ambany ary ny marin'ny mite 45 degre amin'ny vera fisaka. Kodiarana efatra no miasa amin'ny sisiny ambany ary ny kodia efatra kosa miasa ny sisiny mitre miaraka. Samy vita famaranana tsara ny sisin'ny roa tonta. Masinina fampiroboroboana / vidiny avo lenta ity. Ireo kodiarana efatra ho an'ny sisiny mitera dia miorina amin'ny fototr'ilay milina, tsy misy fihozongozona. Conveyor dia mandray rafitra fandefasana rojo. Ny hafainganam-pandeha dia azo ovaina amin'ny alàlan'ny mpandrindra hafainganana. Ny haingam-pandeha sy ny hatevin'ny fitaratra dia miseho amin'ny fampisehoana nomerika.
Masinina 13 rojom-pifandraisana nomerika milina fitetezana vera 45 degre
Ity motera ity dia manana motera 6 raikitra amin'ny 45 degre, izay azo ampiasaina hanamboarana mitre 45 degre.
Ny milina dia natao ho an'ny fikosoham-baravarankely / poloney ary ny sisiny miter 45 degre, miaraka amin'ny fikolokoloana arris indray.
Conveyor dia mandray ny rafitry ny fandefasana rojom-borona misy paoma matevina manokana.
Ny lalamby anoloana dia entin'ny motera ary mifindra mifanitsy aminy mba hifanaraka amin'ny hatevin'ny fitaratra samy hafa.
milina mandeha ho azy milina ABB maotera fitaratra milina fanenoman-milina
Ny milina dia manamboatra fitotoana / famolahana ambany amin'ny vera fisaka, miaraka amin'ny fikolokoloana arris.
Conveyor dia mandray ny rafitra fandefasana baolina, izay misy bearings telo izay mihodina manaraka ireo torolàlana vy voajanahary avo lenta, mihetsika tsara ny fihetsiky ny vera.
Ny rafitra fanaraha-maso dia mandray ny singa fanaraha-maso Mitsubishi PLC, izay misy fifehezana mandeha ho azy sy manual,
Ny masontsivana miasa lehibe dia napetraka ary aseho amin'ny alàlan'ny interface interface.
Ny haingam-piasana dia azo ovaina amin'ny alàlan'ny elektronika.
Spindles dia entin'ny motera ABB avo lenta.
milina fanodinana vera kely habe ara-toekarena
Ny milina dia natao ho an'ny fikosoham-baravaran'ny vera fisaka, miaraka amin'ny fikolokoloana arris. Izy io dia mety amin'ny fikolokoloana henjana alohan'ny fanamafisana ary ny fanodinana hafa. Conveyor dia mandray ny rafitry ny fandefasana rojom-borona misy paoma matevina manokana.
Milina fanodinana vera 9 maotera rafitra malaza indrindra
Ny masinina dia manao ny fikosoham-baravarankely / manaingo azy amin'ny vera fisaka, miaraka amin'ny polotra arris. Conveyor dia mandray ny rafitry ny fandefasana rojom-borona misy paoma matevina manokana. Ny lalamby anoloana dia azo afindra mifanindry mba hifanaraka amin'ny hatevin'ny fitaratra samy hafa. Ny hafainganam-pandeha dia azo ovaina amin'ny alàlan'ny mpandrindra hafainganana. Ny spindles arris dia mandray ny firafitry ny takelaka tarihiny, tsy misy fihozongozona amin'ny fiasana. Mora ampiasaina ity milina ity ary misy fampisehoana tsara. Ny kodiarana farany dia mety ho kodiarana poloney na kodiarana fingotra tsy miankina.